Imibuzo evame ukubuzwa - Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd.
Ingabe ukuhweba inkampani noma nomkhiqizi?
Singabakhiqizi, yonke imishini yenziwa yithi futhi singanikeza ngenkonzo oyifisayo ngokwezifiso zakho.
Ikuphi indawo yakho yefektri? Ngingavakashela kanjani lapho?
Imboni yethu itholakala eShenzhen, China. Ungasivakashela ngendiza. Imizuzu engama-25 kuphela ukusuka efektri yethu ukuya eShenzhen International Airport. Singahlela imoto ezokulanda lapho.
Isikhathi sakho esingakanani ukulethwa?
Ngokuvamile yizinsuku ezingama-3-5 uma izimpahla zisesitokweni. noma kuyizinsuku eziyi-15-45 uma izimpahla zingekho esitokweni, ngokuya ngobungako bakho kanye nezidingo zakho. Sizoyiletha ngesikhathi njengoba usuku esivumelane ngalo ngazo zombili izinhlangothi.
Ngingawufaka kanjani umshini wami lapho ufika?
Sizohlinzeka ngamavidiyo wokufaka kanye nokufundiswa, noma singaphinde sihlele ikholi yevidiyo i-ASAS umshini usulungile kusayithi lakho ukukufundisa ukuthi uyisebenzisa kanjani imishini. Futhi uma udinga, singathumela futhi unjiniyela wethu eceleni kwakho ukukusiza uvivinye futhi uqeqeshe ochwepheshe bakho.
Kuthiwani uma umshini wehluleka ngesikhathi sokusetshenziswa?
Imikhiqizo yethu izohlolwa ngokucophelela futhi iqinisekiswe ngaphambi kokulethwa, futhi sizonikeza imiyalo efanele namavidiyo okusetshenziswa kwemikhiqizo; Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethu isekela insizakalo yesiqinisekiso sempilo yonke, uma kukhona imibuzo ngesikhathi sokusetshenziswa komkhiqizo, sicela uthintane nabasebenzi bethu.
Siyini isiqinisekiso uma sithenga kuwe?
Yonke imishini e-ode kithina izohlinzeka ngesiqinisekiso sonyaka owodwa kusukela ngosuku lokulethwa. Uma kukhona izingxenye eziyinhloko eziphulwe ngaphakathi kwewaranti futhi ezingabangelwa ukusebenza ngokungafanele sizobe sesinikeza izingxenye ezintsha mahhala.
Iyiphi inkokhelo oyamukelayo?
Sisebenzisa i-T / T noma i-L / C ngokujwayelekile, futhi singaxoxisana ngendlela yokukhokha.
Izinsizakalo zangaphambi kokuthengisa:
1. Ukuhlinzeka ngoxhaso lobuchwepheshe lobuchwepheshe.
2. Thumela ikhathalogi yomkhiqizo nokusebenza kwevidiyo.
3. Uma unanoma imuphi umbuzo we-PLS xhumana nathi online noma usithumelele i-imeyili, siyathembisa ukuthi sizokunikeza impendulo ngesikhathi sokuqala!
4. Ukushayelwa ucingo noma ukuvakashelwa efemini kwamukelwa ngemfudumalo.
1. Siyathembisa ukuthembeka nokungenzeleli, kuyintokozo yethu ukukusebenzela njengomxhumanisi wakho wokuthenga.
2. Siqinisekisa ukugcina isikhathi, ikhwalithi kanye nenani ngokuqinile ukusebenzisa imigomo yesivumelwano.
3. Sigxila ekukunikezeni isisombululo esisinyathelo esisodwa sezidingo zakho
1. Ungayithenga kuphi imikhiqizo yethu iwaranti yeminyaka engu-1 nokunakekelwa kwempilo isikhathi eside.
2. Insizakalo yocingo yamahora angama-24.
3. Isitoko esikhulu sezingxenye nezingxenye, izingxenye ezigqokwa kalula.
4. Onjiniyela bangasebenza endlini ngendlu.